အသားကင်ဆလပ်ထုပ် ~ စန္ဒကူး
စားလို့ကောင်းမဲ့ပုံဘဲနော်... မျှစ်ကအိမ်ရောက်မှ ခုတ်ရင်မရဘူးလား :D
မျှစ်လား အိမ်မှာခုတ်လို့ရတယ် ဒါပေမယ့် တောင်ပေါ်မှာ အဝေးကြီးသွားဝယ်ရတာလေ..
အဲဒါကြီးအကုန်လုံးပြန်သယ်လာရရင် မလွယ်ဘူး။ အခြားအသီးရွက်တွေလဲပါသေးတယ်လေ..
ပီးတော့ မျှစ်ကအခွံကလေးနေတာ..အထဲက အနုလေးက သိပ်ရှိတာမဟုတ်း)
မစားပါနဲ့ ကိုကြီးကျောက်ရယ်.. အသီးရွက်သာများများ စားပါ..း)
ဆလပ်ရွက်နဲ့အသား စားချင်စရာ။ မျှစ်ကို နာနတ်သီးတွေမှတ်နေတာ :D
အမဲသားက ပုံထဲမှာ စားချင်စရာလေးရယ်း)
ဒါပေမဲ့ မစားတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသွားပြီ
ပုံလေးကြည့်ပြီး ပြန်သွားတယ် တာ့တာ
ရှမ်းပြည်မှာ အသားကင်ဖို့အသားတွေ နှပ်ရင် နှမ်းစေ့ လေးတွေကို နဲနဲထောင်း ပြီးထဲ့တတ်တယ်.. အနံ့မွှေးတယ်.. မျှစ်ကတော့ မုန်းလောက်အောင်စားဖူးတယ်.. မျှစ်တင်မကဘူး.. မျှစ်ပိုး (မျှစ်ထိပ်ပိုင်းတွင်အရောင်ညှိုးပြီး ၀ါနေပါက မျှစ်ပိုးရှိပါသည်) ဟာ မျှစ်တစ်ခုမှာ မှ တစ်ကောင် ထဲရှိပါတယ်.. စားရတာ အင်မတန် စိမ့်ပါတယ်.. လားဟူ တွေကို မေးကြည့်တော့ နင်တို့မြန်မာလို ခေါ်ရင် မျှစ်လောက် ပေါ့တဲ့.. စားရမှာ တွန့်သွားပေမဲ့ စားခဲ့ပါတယ်... နောက် ၀ါးပိုး (မျှစ်ဘ၀က တက်လို့ဝါးနုနု တွေ ဖြစ်လာရင် အခါတွေ လားဟူတွေ ၀ါးရုံတွေ ဖက် မျက်စေ့ ကျလာပါပီ) က တွင်းပိုး နဲ့တူပါတယ်.. ၀ါးလောက်လို့လဲ ပြောပါတယ်.. ၀ါးဆစ် တစ်ခု အရောင်ဝါနေပီဆိုရင် အဲ့ဒီမှာ ၀ါးလောက်/ ၀ါးပိုးရှိပါတယ်.. ၀ါးဆစ်တစ်ခုမှာ အကောင် အများကြီးရပါတယ်... “ဘာ့ကြောင့်မှန်း မသိ ရေးရင်းရေးရင်း ရေးကောင်းလာလို့ကော်မန့်ရှည် သွားပါ၏” ခွေးလွတ် ပေးကြပါရန်.....
Hay KUU KUU! Give meafight.I cook same curry,today.I bought it 1kg 4euro 65.
Havealook at my web page; ford ranger